वर्डप्रेस स्लगको साथ त्यो Pesky -2 मुद्दाबाट कसरी छुटकारा पाउने Martech Zone
वर्डप्रेस स्लगको साथ त्यो Pesky -2 मुद्दाबाट कसरी छुटकारा पाउने
शुक्रबार, फेब्रुअरी 6, 2015 शुक्रबार, फेब्रुअरी 6, 2015 Douglas Karr
म आशा गर्दछु कि म यो एक मात्र होइनँ, तर म यसलाई घृणा गर्दछु जब म एक WordPress ब्लगमा कोटी थप गर्दछु र यूआरएलले केही यस्तो परिवर्तन गर्दछ। / कोटी -२ /.
वर्डप्रेस किन -२ थप्दछ?
तपाईंको ट्यागहरू, कोटीहरू, पृष्ठहरू र पोष्ट सबैसँग एक छ Slug त्यो एकल तालिकामा परिभाषित गरिएको छ जहाँ तपाईंसँग तीन क्षेत्रहरू बीच कुनै डुप्लिकेटहरू हुँदैन। सामान्यतया हुने कुरा यो हो कि तपाईंसँग पृष्ठ, पोष्ट वा ट्याग छ जसमा स्लग छ त्यसैले तपाईं यसलाई वर्ग स्लगको रूपमा प्रयोग गर्न असक्षम हुनुहुन्छ। तपाईलाई त्यो भन्न सक्नुको सट्टा, वर्डप्रेसले स्लगलाई केवल -२ सँग अंक दिन्छ। यदि तपाईंले फेरी त्यसो गर्नुभयो भने, यसले--थप्नेछ, र यस्तै। स्लगहरू सम्पूर्ण सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली भरि अद्वितीय हुनुपर्दछ।
यहाँ हाम्रो ग्राहकहरु मध्ये एक को साथ मुद्दाको एक स्क्रीनशट छ।
मैले -२ लाई कसरी ठीक गर्ने?
पहिले तपाईले पृष्ठहरू, पोष्टहरू, र ट्यागहरू खोजी गर्नुपर्नेछ जुन तपाईं चाहानुहुन्छ स्लग नामको लागि। एकचोटि तपाईंले यो फेला पार्नुभयो भने, तपाईंले त्यो पृष्ठ सम्पादन गर्न आवश्यक पर्दछ, पोष्ट र / वा ट्याग बिभिन्न स्लगको साथ आउन। धेरै जसो नभई हामी यसलाई ट्यागको रूपमा देख्छौं र प्रत्येक पोष्टहरूबाट ट्याग हटाउँदछौं। यो गर्न:
टाइप गर्नुहोस् स्लग नाम कि हामी ट्याग पृष्ठमा खोज क्षेत्र खोज्दै छौं।
ट्यागमा प्रयोग गरिएको पोष्टहरूको सूची अब सूचीबद्ध गरिएको छ।
पोष्टहरूको मात्रा जुन ट्यागमा प्रयोग गरिएको छ ट्यागको दायाँतर्फ संकेत गरीएको छ।
त्यो परिमाणमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले प्रत्येक पोष्टको सूची प्राप्त गर्नु हुने छ जुन ट्याग प्रयोग गरिएको छ।
क्लिक गर्नुहोस् Quickedit प्रत्येक पोष्टमा, ट्याग हटाउनुहोस्, र पोष्ट बचत गर्नुहोस्।
ट्याग पृष्ठमा फर्कनुहोस्, ट्यागको लागि खोजी गर्नुहोस्, र तपाईंले देख्नुपर्दछ कि ट्याग ० पोष्टमा सूचीबद्ध छ।
यदि यो ० छ भने ट्याग हटाउनुहोस्।
ट्याग हटाइएको छ भने, तपाईं वर्ग स्लग अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ र -२ हटाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईले अहिले सम्म गर्नु भएको छैन!
तपाईको साइट कोटि पृष्ठहरु खोज परिणामहरुमा अनुक्रमित गरिएको हुन सक्छ, तपाईले पुरानो यूआरएल लाई -2 को साथ नयाँ URL मा रिडिरेक्ट गर्न चाहानुहुन्छ।
टैग: कोटी स्लगट्याग हटाउनुहोस्पृष्ठ स्लगपोस्ट स्लगट्याग हटाउनुहोस्स्लगहरूट्याग स्लगअपडेट स्लगWordPress